Jesosy no lalana - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Jesosy no lalana
Rehefa nanomboka nanaraka ny lalan’i Kristy aho dia tsy faly tamin’izany ireo namako. Nilaza izy ireo fa Andriamanitra iray ihany no mitarika ny fivavahana rehetra ary naka ohatra ny amin’ireo mpihanika nandeha tamin’ny lalana samy hafa ka mbola tonga hatrany an-tampon’ilay tendrombohitra. I Jesosy mihitsy no nilaza fa tsy misy afa-tsy lalana iray: “Izay alehako dia fantatrareo ny lalana. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay alehanao; ahoana no hahafantarantsika ny lalana? Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako” (Jaona 14,4-6).
Marina ny filazan’ireo namako hoe maro ny fivavahana, fa rehefa mitady an’ilay tena marina, dia Andriamanitra Tsitoha, dia tokana ihany ny lalana. Ao amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo isika dia mamaky ny amin’ny lalana vaovao sady velona ho ao amin’ny fitoerana masina: “Fa ankehitriny, ry rahalahy, ny ran’i Jesosy no ananantsika fahasahiana hiditra ao amin’ny fitoerana masina, izay novohany ho antsika ho vaovao. ary lalana velona eo amin’ny efitra lamba, dia ny amin’ny fanatiny ny tenany» (Hebreo 10,19-20).
Ny Tenin’Andriamanitra dia manambara fa misy lalana diso: «Ny lalana iray dia toa marina; kanjo hovonoiny ho faty any am-parany » (Ohabolana 14,12). Milaza amintsika Andriamanitra fa tokony hiala amin’ny lalantsika isika: “Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako, hoy Jehovah, fa tahaka ny hahavon’ny lanitra noho ny tany no hahavon’ny lalako noho ny lalanareo sy ny lalanareo. ny fihevitro dia tahaka ny fihevitrareo” (Isaia 55,8-9).
Tany am-piandohana dia tsy dia nahatakatra firy ny Kristianisma aho satria maro amin’ireo mpanara-dia azy no tsy maneho ny fomba fiainan’i Kristy. Ny apostoly Paoly dia nilazalaza ny maha-Kristianina ho toy ny fomba iray: “Nefa ekeko aminao fa, araka izay lazain’izy ireo hoe sekta, dia manompo an’Andriamanitry ny razako aho, ka inoako izay rehetra voasoratra ao amin’ny lalàna sy ny mpaminany.” (Asan’ny Apostoly 24,14).
Teny an-dalana ho any Damaskosy i Paoly mba hamatotra ireo izay nanaraka izany lalana izany. Nivadika ny latabatra, satria nohajambain’i Jesosy teny an-dalana i “Saoly” ka tsy nahita intsony izy. Rehefa feno ny Fanahy Masina i Paoly, dia nisy kirany nianjera tamin’ny masony. Nahiratra indray izy ary nanomboka nitory ny fomba fankahalany sy nanaporofo fa i Jesosy no Mesia. “Ary niaraka tamin’izay dia nitory tamin’i Jesosy tao amin’ny synagoga izy fa Zanak’Andriamanitra” (Asan’ny Apostoly). 9,20). Nikasa ny hamono azy ny Jiosy noho izany, nefa Andriamanitra niaro ny ainy.
Inona no vokatry ny fandehanana amin’ny lalan’i Kristy? Nampirisika antsika i Petera mba hanaraka ny dian’i Jesosy sy hianatra avy aminy mba ho malemy fanahy sy hanetry tena: “Raha mijaly sy miaritra noho ny fanaovana ny tsara ianareo, dia fahasoavana avy amin’Andriamanitra izany. Fa izao no niantsoana anareo, satria Kristy koa aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany » (1 Petera . 2,20-21).
Misaotra an'Andriamanitra Ray naneho anao ny lalan'ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa Jesosy irery ihany no lalana, matokia Azy!